Taliyaha militariga Suudaan iyo saraakiil kale oo loo xiray inqilaab horleh – Radio Daljir
Taliyaha militariga Suudaan iyo saraakiil kale oo loo xiray inqilaab horleh
Luulyo 25, 2019 6:55 b 1
Militariga Suudaan ayaa sheegay inay xireen taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo dhowr sarkaal, kadib markii ay isku dayeen inqilaab ay ka sameeyaan dalkaasi horaantii bishaan.
Golaha militariga ee awoodda kala wareegay madaxwaynihii xukunka dheeraa Omar Al-Bashiir bishii April ayaa sheegay inay xireen ku dhowaad 16 ka mid ah militariga oo shaqaynayay iyo saraakiil howlgab ah oo isku dayay inay afgambi sameeyaan 11kii July ee sanadkan.
“Militariga ayaa ogaaday isku day afgambi oo uu damacsanaa General Hashim Abdel Muttalib Axmed oo ah madaxa ciidamada qalabka sida iyo dhowr sarkaal oo katirsanaa ciidamada oo darajadoodu saaysso ayna ku jiraan sirdoonka, waxaana wehlinayay hogaamiyeyaal katirsan dhaqdhaqaaqa Islaamka iyo xisbiga Congresska Qaranka” ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay wakaaladda wararka Sudan ee SUNA.
“Dhamaantood waa la xiray, baaritaano ayaa kusocda ” ayaa lagu yiri qoraalka.
Wadahadalada golaha militariga iyo dhadhaqaaqa Dimuqraaduyad doonka ayaa kusoo dhamaaday isfaham waa, iyadoo laga wada hadlaayay awood qaybsiga.
Guddoomiye Yarisow oo dhaawiciisa saaka loo qaadayo dalka dibadiisa